Gulufkii Garacad iyo gabannada lagu qabtay! – Bashiir M. Xersi
Gulufkii Garacad iyo gabannada lagu qabtay!
Date: 23 Mar 2016Author: Bashiir M. Xersi 3 Comments
Marka hore, waan soo dhaweynayaa, hormar walba, oo laga gaaro iyo guul kasta, oo laga soo hooyo, dagaalka lagu la jiro XAGJIRKA iyo ARGAGIXISADA, in kasta, oo madaxdeenna ay ka buuxaan, marka hambalyo iyo bogaadin ayaan leeyahay Puntland shacab, ciidan iyo madaxba.
Ka dib, waxaa muhim ah, in aan is la garwaaqsanno, in wax walba, sida naloogu sheego u qaadashadoodu, in aysan habboonayn, waliba kuwooda, aad arki karto, garan karto ama dareemi karto. In dagaal dhacay, oo maalmo socday, la is ku ma hayo, in guul iyo gobonnimo la gaarayna la is ku ma hayo, balse, waxaan weydiimo ka qabaa, hadallada ah; koofur dagaalka argagixisada ha uga dayato Puntland, kaba sii darane, in la yiraa; reer koofur waxay isaga saari la’yihiin ARGAGAIXSADA shacabka ayaan taageero siin ciidanka!
Marka hore; Koofurta Shabaabka ka dagaala tiradoodu waa meeqa? Kuwa ka dagaalay barina waa meeqa? Ma ciidan doon ku yimid, weliba doomaha kalluumaysiga “laash/huuri” oo qaadkiisu yahay 30 qof iyo wax la mid ah, tiradoodana lagu sheegay, 200- 250, ama badiyoo 500 ka dhig, ee weeraray Puntlanad, miyaan la misaaldhigi karnaa, kumannaan kun, oo deegaanno, gobollo, magaalooyin iyo tuulooyin ka la duwan joogaa, ee koofurta dhibka ku haya, hubkooda, saanaddooda, ciidankooda iyo maalgelintooda leh?.
Danta taal koofur ma taal bari? Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant’Elena, 5 maggio 1821) xilli uu duullaan ku ahaa dalka Masar, ayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidankiisu ka soo horjeesteen. Si uu ugu qanciyo ayuu wuxuu yiri, oraahdaan caan baxday ee ah: “Ii sheeg qofka Masar xukuma, waxaan kuu sheegayaa, qofka adduunka xukumee!” illeen Masar waxaa ku yaal Marinka Suways, oo halbowle iyo dhuun u ah, isu gooshka dhammaan ganacsiga dunida. Haddaba, waxaan leeyahay; ii sheeg, qofka koofurta iyo Muqdisho xukuma, waxaan kuu sheegayaa, qofka dalka xukumee!
Faragelinta koofurta lagu hayo, ma lagu hayaa bari? Qodobkan, waxaan garan reer waqooyi iyo reer bari badan, oo mooda nabadda ay haystaan, in ay ku timid kaliya, in reeruhu nabad qaateen, oo waxgaradkooda isu taageen maamul iyo hannaan dawladnimo. Hubbanti, haddana, mar walba, oo aad ka fog tahay, xuddunta mashaqada iyo meelaha manfacada iyo miiddu taal, hubaal, in ay dhib yari iyo dhibaato la’aan wax badan kuugu qabsoomayaan. Ma ogtahay, haddii ay koofur noqoto nabad, in dalka dhan nabad noqonayo? Marka hoggaan ka sokow, saw arrin ka xoog badan ma jirto hoggaanka?.
Hubka iyo saanadda ay helaan Shabaabka ka dagaala koofur yaa siiya? Xasuustii ugu dambaysay waxay eheed, markab badda lagu qabtay, oo siday hub, lana yiri wuxuu u siday Shabaab. Adi ma maqashay, meesha uu ka yimid? Dalka laga lahaa? Shaqaalaha saarraa iyo dakadda uu ka soo shiraacday? Laga yaabee, in aad i leedahay, maxaysan reer koofur u raadin, ma qof kale ayaad ka sugaysaa? Waa runtaa, balse, ma is weydiisay, inaad la kulmin waana hubaaye, cabaqad kugu gudban, cudud xoogle iyo culuys ku saran, sideed ka yeeli leheed?.
Ma ku la tahay hubkan ay qaybinayso Imaaraadku, ee beel iyo maamul walba loogu deeqay, in uu yahay darajayn iyo dawladnimo raadin? Ani is ma dhihin, haddana, anagu wax is ma weydiinnee, aan hubka is ka guranno, hadhawna aan is ku dilno!
Anigu si kale ayaan u soo gudbin lahaa fikirka hubaynta maamul gaar ah iyo gurmad saanad siinta, oo ah; yaa noo damaanad qaadaya, in hubkaa, aan lagu weerari doonin beel, halka ay eheed, in lagu la dagaalo ARGAGIXISO? Waxaan wada xasuusannaa, dagaalkii Gaalkacyo, ee saddaxda maalin socday, saddaxdaba dagaalka waxaa soo qaadday Puntland, sidoo kale, labadii bil ee la soo dhaafay, gobolka Mudug, wuxuu mar walba, qarka u saarraa, in uu dagaal ka qarxo, sidoo kale, Sool dagaal ayaa ka taagan, haddaba, maxaa diidaya, in hubkan iyo saanaddan loo adeegsado dagaalkaa beeleed, ee laga cabsi qabo?.
Ka gudub, reer is ku dan iyo duud ah iyo dad ka la dan iyo duruuf ah, is ku si u ma hawlgali karan, oo maxaan ka la duwanaashaha qorshaha loogu darsan? Waxaan uga jeedaa, haddii ay guul degdeg Puntland ka soo hoysay, malleeshiyo kooban oo badi dhallinyaro ah, aan waayo aragnimo iyo lahayn xeelad dagaal, ma la la barbardhigi karaa, beelaha kale, ee koofurta dega, ee tarada badan, ee is diiddan, is lana dhalan, is ku danna ahayn, ee ka la damaca ah?.
Marka ay reer qura joogto, way dhacday, walina dhacaysaa, in Shabaab la is ka celiyey, la iskana celinayo. Caddayn; marka ay reer joogto, ogoow, beesha Dusmo reeb, oo aan waliba aragtida la dagaallanka Shabaab ku midaysnayn, maadaama uu ka dhashay, Xasan Daahir, Aadan Cayroow iyo rag kale, ayaa ka hor istaagay, in ay qabsadaan Guri Ceel, Matabaan, Dusmo reeb iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada. Xasuusta ku hay, reerkaa dawlad, maamul iyo hoggaanka bari ay haystaan ma haysan, haddana, waa is ka celiyeen, oo waa taas maanta deegaannadaa lagu nabdoon yahay, si kalaba hoggaan xumi ha uga jirtee!
Gobollada dhexe ma jirto, meel sida ARGAGIXISADA looga la dagaalay dalka oo dhan looga la dagaalay, oo iyaga oo shacab ah, maamul goboleed lahayn, ayey is ku fillaadeen siddeed sanado, cabaadna laga ma maqal, walibana ka guul keeneen, haddana, abaal ku ma helin, marka laga reebo siyaasad xumadooda iyo hannaan la’aantooda, oo ay wehliso, ballanqaadyo aan maangal ahayn, oo dawladda dhexe aysan u fulin.
Mid kale aan kuugu daro; bishan dhexdeeda iyo bishii ka laba, gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanka, Bacaadweyn, Camaara iyo agagaarkooda iyo Wabxo, oo Galguduud ah, waxaa ka dhacay dagaallo ay dadka deegaanku isaga dhiciyeen ARGAGIXISADA, haddaba, masuul leh, waxaan u diraynaa hub iyo saanad yaa maqlay? Sidoo kale; tuulada Ceel Baraf, Gobolka Sh. Dhaxe, Ceel Cali gobolka Hiiraan, dadka deeganku wuu is abaabulaye, waana is ka dhiciyeen argagxisadee, mey hub iyo saanad u diraan? Mey taageero iyo u fidiyaan taakulo? Midda ka weyn, ma ka maqasheen wax buunbuuninaya guulahooda? Mise aragtay, iyaga oo carruur sii bandhigay? .
Maamulka Puntland, maxay dawladda ugu eedeeyn, in ay Shabaab u soo dirtay, halka dadka deegaannadaa kale, aysan dawladda ku eedayn, in ay iyagu u soo direen Shabaab ama ay dawladdii dacaayad ka fidiyaan? Waxaan maqlayaa, sidoo kale, in ay dheheen hubkii loo diray, in ay abaalkii dawladda u quuri waayeen, ee ay dheheen, waxaa noo soo diray Imaaraad, maxaa abaal dhacaa sabab u ah?.
Tan kale, ma illowdeen, in Puntland qayb ka tahay kuwa daneeya, in ay Shabaab ka sii jiraan koofur? Xasuuso waraysigii laga qaaday wiilkii uu adeerka u ahaa Faroole, ee ay shabaabku dileen, ka dib markii ay qabteen!
Ugu dambayn, ma waxay idin la tahay, in wiilashaa yaryar ay bari u aadeen, in ay qabsadaan? Horta ma la soo qalday? Ma la soo qasbay? Ma runbaa in dagaal lagu soo qabtay? Imaha yaryar, ee aad aragteen sawirradooda, oo aan dhulka aqoonnin, gurmad heysannin, 4ta dhinac laga xigo, ee aan garannayn, ayey intaas la rafanayeen, ee ma la dhihi karaa, shabaab ayey la dagaaleen?.
Haddii dagaalka ARGAGIXADU dhab yahay, oo run laga sheegayo, dagaalka ha lagu qaado buuraha GALGALA, haddii kale yaan na la noojin, ee faanka iga aayariya! Carruurta Bakool, Gedo iyo Bay keliya maxaa loo qabtay, gobollada kale, waliba deegaanka Bari, miyeysan lahayn dhallin Shabaab ah? Suuragal ma tahay, in ilmo 15jir ah, oo hadda Bakool laga keenay, uu ku hadlo lahjadda MAXAA TIRI, oo fasiix ah? Kaba muhimsane; aawaye, hoggaankii carruurtan soo afduubay, maxaan na loo tusin?.
Tan ugu wada muhimsan, maxaan loo dhawrin xuquuqda maxbuubyada, waliba carruurta ah, mise xeerkiinnu waa xeerkii habar dugaag, ee ahaa; ha la isu cuno, sida loo ka la weyn yahay ama loo ka la xoog badan yahay? Weydiimuhu ma yara, balse, yaaba is hordhigaya, dadka dhan caaddifad iyo waxaa hagaya laab la kac, oo ah waxa halkaa na dhigay!
Previous Previous post: Fal gurracan iyo dhacdo fool xun!
Next Next post: Muqdisho MAHDIN ayey naga mudan tahay!
3 thoughts on “Gulufkii Garacad iyo gabannada lagu qabtay!”
23 Mar 2016 at 1:35 pm
I have been having same thoughts but couldn’t pen it down, thanks to you for spotting it on. well, We have seen child soldiers captured as prisoners, do you think punt land would execute them or would they reffer to the international law of child rights? Methink there is parallel story of this incident and the poker game played by Gaas is folded by double dice…….
I find the whole scenario what my Ayeeyo would have referred as DABINO BADAN….
H E Abdikadir Kambale says:
JAWAAB GAABAAN O KU DHISAN XAQIIQ
Si qoto dheer ayaan u dhuuxay dulucda qormadan uu qoray walaal Bashiir Maxamed xirsi,hadana anigu wax badan ayaan kaga fikir duwanahay waxaa uu in badan halkaan kusoo bandhigay waxa aay u egyihiin wax dabo gaaban oo laahayn daliil ku filan.
Al-shabaab waxa ay puntland u gaysteen waynu wada ognahay waa iyagii laayay culimada ugu caansana geyigan soomaliyeed SH Cabdiqadir Nur farah iyo Dr Ahmed xaaji abdiraxmaan waxaa ay sidoo kale laayeen aqoon yahano,siyaasiyiin,ganacsato iyo saraakiil badan oo reer puntland.
Ma garan marka uu leeyahay maamulka puntland ayaa daneeya in al-shabaab uu kasii arimiyo gobolada koonfureed waxa uu ula jeedo waxaanse oran karaa waa uu u hafay ama u gafay hadalkaas,waynu wada daawanay waraysigii wiilka uu adeerka u ahaa Ex-Abdiraxman sheikh maxamed faroole madaxwaynihii hore ee puntland mase arag hal mar oo uu leeyahay puntland waxay danaynaysan in al-shabaab konfur kasii taliso waayo maba aysan dileen hadii puntland iyo al-shabaab ay isku aragti noqdeen oo waa ay wada shaqaysan lahaaayeen.
Kaliya waxaa uu xusay arimo sirdoon la xiriira taasina waa wax caadiya oo dawladaha aduunka ay ka sameeyen meeshii ay is leeyihiin khatar amni ayaa idiinka iiman karta.
Waynu garan karaa maxbuus shabaab gacanta ugu jiro waxa u sheego karo inaysan in badan run ahayn isaga oo ka cararaya xukumada adage e ay kooxdasi ku rido dadka ay ugu yeeraan jawasiista.
marka uu leeyahay yaa damanad qaadaya hubka puntland la siiyay horay puntland waxaa ay uhaysatay hub farobadan oo isugu jiro nooc walba oo ay ku jiraan kuwa waawayn kuwaas yaa puntland u hayay awal oo u damaanad qaaday.
Waxaase xaqiiq ah in nidaamka xamar ka jira inuu si gurac u istcmaalo deeqaha uu ku helo magaca soomalieed waxaa xaq ah in puntland iyo maamulada kaleba ay qabytooda qaatan hubka xamar ku xaraysan ee kooxda iyo dadka gaar ka ah u afduuban, waynu wada ogayn in hubkii qaranka intii galmudug lagu soo hubeeyey ay ku khal khal galiyen amniga puntland.
Tan kale al-shabaabka puntland kusoo duulay waxay doonaan ha ahaadaan dantay doonadaan hala haadaan puntland way iska difaacday waxaana ay badbaadisay dhalin yaradii la marin habaabiyay,XASUUSO HADAL GAAS ee ahaa ‘’’’’Waanu xanaanayn doona wiilasha lasoo khalday””” maxay tahay danta ugu jirta puntland in wiilashasa ay xanaanaysoo oo aan ahayn soomalinimo iyo xilkasnimo mooye.
Puntland waxa ay uheelan tahay midnimada ummada soomaliyeed waana ceeb iyo waji gabax in maalin walba ay dad soomali ah ka shaqaynayaan sidii ay ukala dhantaali lahaayeen maamulkaas soomaliyeed ama dagal halagu soo qaado ama qalin halagula dagaale,waxaa haboon inaan tageerno shacabkaas somaliyeed nabadooda, kuwa aan hada nabada haysan nabad loo raadiyo.
Ma aqaan inay aqoon la,aan ka tahaye qoraagu wuxuu yiri koonfur maslaxada iyo danaynta la danaynayo puntland lama daneeyo ogow maantay waxa dunida ugu qaalisan oo ah shidaal iyo macdan waxaa ay ceegaagan oo baaris lagu ogaaday in ku jiraan deeganadaas puntland,kaba sii fiicana waxaa mara togag aad uwaawayn oo biyo ah,biyuhuna wa waxa qarnigan sababi doona dagaalka ugu wayn dunida.
Tan kale qoraalkaagu kuma dhisan xogagaalnimo waayo puntland waxay ka sifaysay buuralayda gal-gala shabaabkii ku dhuumalaysan jiray adna waxaa tiri maa lagu duulo,maxaa lagu duula lagaba saarye walow ay hadana wali ciidamada puntland isweer kahayaan buurtaas si dhowna ula socdaan dhaqdhaaq kasta oo kajira buuralayda.
Waxaa xaqiiq ah in labada diyaaradood ee hubka ahaa ee puntland loogu deeqay ay kala bixiyeen dawlada federalka iyo dawlada imaratka,ma qabo in lagu amaano halkaas diyaarad oo ay bixisay dawladu waayo waxa aahayd waajib qaran oo ay kaa gabisay,ogowna waxaa loo mahad celiyaa cidii si tabarucaad ah wax ku siisa ee waxan waxa ay ahaayeen xaqi ay puntland lahayd.
Waxaa iga talo ah soomali qori bay isku laysaye inaan qorina loogu darin,qalinkeenu ha noqdo mid wax dhisa ee yuusan noqon mid wax dumiya.
Author Abdikadir Ibrahim ahmed (kambale)
Sadiiq Maxamuud says:
27 Mar 2016 at 3:13 pm
asc tala gaaban
ugu allah ayaa mahada iska leh mida xigtana waxan u mahad celinayaa dhalin yarada soomaliyeed meel kasteey joogaan waxaa doonayaa inaan dhowr oraah ka iraahdo qormooyinka
walalka dhalin yarada ahoow soow ma ihid mustaqbalkii birito? qasab miyaa dadka naga waaaweyn haday qalad ku hadaqaan inaan u rumayno hadaba haday sidaa dhacdo maxaan ku kala duwanahay odaygaa qaldamay iyo adiga dhalin yarada ah ee rajada laga lahaa inuu wax isbadala layimaado maxaad kukala duwan tihiin odaydii marku hadaqaba qabyaalad ku hadaaqayay iyo aniga reerkaygaa quman.
kabasoo qaad xog ayaad soo aruurisay maxaa diiday inaad u sheegto si aan caadifad qabyaalad ku salaysneen maxaase diiday walaalka kaloow markaad jawaabayso inaad u jawaabto si aan qabyaalad ku salaysneen hubaal bini aadamkoo idi waywada qaldamaan haba ugu badnaadaan kuwa haatan xilalka noo hayee.
soomaaliya faaida kaliy ay ku tashanayso oon dhalinta aqoon yahanada ah ee usoo baxaya aanan ahayn malaha waxa meesha ay taala dhigay xaqiiqdii waa odayaasha maanta qorriga iyo qalinkaba aan ku difacayno ilaa goorma ayan difaaacan qaabta daran ku jiraynaa?
mida kale maxuma inaad qorma xaqiiq ku salaysan aad so gudbiso hadaba maxaa diiday inaad turxaan bixiso ka ilaaliso wararka xanafta keeni kara maxase diiday walalka kaloow inay jawaabtadu ku salaysnato si caam ah?
maxaan ilaa hada dhalinyarada ugu arki la;ahay tusale markii eedeyn ama qalad uu shaqsi am maamul goboleed gaystay lasheego in ruux yiraahdo qaladka waa jiraa
tusaale ahaan waalaha putland dowladoodi inay ka xigsadaan dowlada shisheeye sida imaarad walal masaxbay kula tahay midaa ?
waa sax ma aha maamulkii ugu horeeyay ee shabaab ladagaalama hadana waa maamulkii ugu horeeyay ee intad aragtay oo maamuusa loo sameeyay waa sax qof waajibkiisa kuma amaana bls adoo og duruufaha dalka ka jira hadana hadaaqas inuusoo yeero waa wax lagawada xumaado dowlada soomaliyeed ha tabar daraato bls waxaa xaqiiq ah inay tahay mida kaliya aan gobanima dhab ah ku gaari karno anigu malihi koofur waayo koofur beela aad u badan ayaa daga bls aan muqdisha niraahno tusaale biri doorashada dhacayso haduu kuso baxo ruux putland ah ama waqooyi ah saan qiyasayo jawiga hadalka wuu isbadali doonaa sax muhiimadeenu waa inan dhacdoyinka dhacaya daacad ka ahaana wax kastoo lasheegana angle ka qabyaalada kaleexinaa soow sidaa kuma qumana dhalinyyaro aaadban idinkugu mahad celinayaa